उल्टी जम्पमै पेनाल्टी गोल ! हेर्नुहोस् दुर्लभ भिडियो !
असोज २५, २०७५ बिगुल
एजेन्सी – रुसको विद्यार्थी लिगअन्तर्गत गतसाता भएको खेलमा रुबिन काजानका एक खेलाडीले अविश्वसनीय पेनाल्टी गोल गरेका छन् ।
रुबिन काजानका फरवार्ड नोरिक अब्दालनले उल्टी जम्प हान्दै पेनाल्टी गोल गर्न सफल भएका हुन् । कतिपय विश्वस्तरीय खेलाडीले सामान्य ढंगले समेत पेनाल्टी चुकाउने गरेकोमा नोरिकको यस प्रयासले विश्वभर चर्चा बटुलीरहेको छ । उनको पेनाल्टीसँगै टोलीलेरुबिनले चेबोक्सारीलाई ४-० ले पराजित गर्यो ।
यो उनको पहिलोपटक उल्टीजम्पमा गरेको पेनाल्टी भने हैन । उनले पछिल्लोपटक सन् २०१७ नोभेम्बरमा पनि सोहि प्रकृतिको गोल गरेका थिए । २२ वर्षीय नोरिक रुबिनको दोस्रो श्रेणीको टोलीबाट पनि खेल्दै आएका छन् । उनले सिनियर टोलीमा स्थान पाउलान वा नपाउलान तर उनको यो कलाले सर्वत्र चर्चा भने बटुलेको छ ।
प्रकाशित : बिहिबार, असोज २५, २०७५०८:५०
रोनाल्डोको बलात्कार आरोपमा झुटो कागजपत्र बनाएको खुलासा
एथ्लेटिको र युभेन्टस बीच आज ‘महाभिडन्त’ हुँदै ! एथ्लेटिकोविरुद्ध रोनाल्डोको रेकर्ड यसो भन्छ !
ताजा अपडेट: गुम्यो जिम्बावेको तेस्रो विकेट!
अमितको अर्धशतकसँगै काठमाडौंलाई १ सय ३३ रनको लक्ष्य
विश्व कप किर्केट छनोट: नेपाल र युएईबीचको खेल केहिबेर ढिला गरी सुरु हुने…